News 18 Nepal || घरमा धनधान्यको कमी नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ ? यसो भन्छन् श्रीकृष्ण
घरमा धनधान्यको कमी नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ ? यसो भन्छन् श्रीकृष्ण
काठमाडौं । हिन्दु धर्मशास्त्र महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार एक पटक युधिष्ठिरले श्रीकृष्णलाई प्रश्न गरेका थिए , ‘घरमा सधैं सुख समृद्धि रहोस् अनि धनधान्यको कमी नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ ?’ युधिष्ठिरको प्रश्नको जवाफमा श्रीकृष्णले यस्तो बताए ।
प्रत्येक दिन घरमा गाईको घिउले बालेको दियो दान गर्दा अनि घिउबाट भोगप्रसाद चढाउँदा देवी देवताको कृपा बन्छ । यस्तो गर्दा घरहरूमा दरिद्रताको वास हुँदैन । घर आएका पाहुनालाई पानी पिउन दिँदा अशुभ ग्रह टर्छन् । त्यसैले कोही घरमा आउनेबित्तिकै पहिला पानी दिनुस् ।
महलाई पवित्र खाद्यान्न मानिएको छ । यसले घरबाट नकारात्मक ऊर्जा हटाउँछ । घरलाई जहिले पनि सफा राख्दा खर्चमा कमी आउँछ र धनधान्य बढ्छ । सौर्यमण्डलका ग्रहहरूले मनुष्यको जीवनलाई धेरै प्रभावित पार्छन् ।
प्रत्येक दिन व्यक्तिले ग्रहको हिसाब अनुसार निधारमा चन्दन लगाउँदा शुभ फल प्राप्त हुन्छ । चन्दन निधारमा लगाउँदा शीतलता प्राप्त हुन्छ र पापहरूको नाश पनि हुन्छ । घरमा चन्दन राख्दा त्यसको सुगन्धले नकारात्मक ऊर्जा पनि नष्ट हुन्छ ।
ज्ञान, बुद्धि र संगीतकी देवी सरस्वतीको हातमा वीणा अवश्य हुन्छ । पुराणहरूका अनुसार देवी सरस्वतीलाई कमलको फूलमा बसेको अनि हातमा वीणा समातेको देखिन्छ ।
यो वर्षको होलीमा ४९९ वर्षपछि जुर्दैछ अद्भुत संयोग
किन मनाइन्छ महाशिवरात्री पर्व ?
आज सरस्वती पूजा, यी नाम ११ पटक उच्चारण गर्नुस् हुनेछ कार्यसिद्धि